The Law on Standardization | Department of Research and Innovation : Ministry of Education (Science and Technology)
Call Us: 01 663258
Renewable Energy and Electronic Technology Research Center
Renewable Energy Research Department (RERD)
Re Potential, Installed Capacity & Recommendations
Electronic Technology Research Department (ETRD)
Chemical Technology Research Centre
Food Research Department
Pharmaceutical Research Division
Polymer Research Department
Applied Chemistry Research Department
Nanotechnology Research Department
National Analytical Laboratory
Material Analysis Department
Microscopy and Non Destructive Testing Department
Material Science Research Department
International /Local Cooperation
National Standards and Quality Department
Bio Technology Research Center
Information and Communication Technology Research Center
Department of Research and Innovation(Head Office)
The Law on Standardization
Science ,Technology and Innovation Law
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား နည်းပညာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် နည်းပညာ လွှဲပြောင်းခြင်း အခမ်းအနား
ပဏာမအနေဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည့် တရုတ်-မြန်မာ ပူးတွဲသုတေသန စီမံကိန်းများအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
Yangon Region Earthquake Preparedness and Response Plan
Basic Food Safety and HACCP အထောက်အကူပြုသင်တန်း သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း
“ဝါးအသုံးချမှု၊ ဈေးကွက်အလားအလာနှင့် ဝါးစက်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
၂၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော “Seminar on Strenghtening Knowledge, Research and Practice for Professional Development of Internship Students and Awarding Certificates” အခမ်းအနား၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၁၇-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲနှင့် အမှတ်စဉ် (၁၉) သင်တန်းသားများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
3rd and 4th Joint SEA-EU Joint Funding Scheme (JFS) Call for Science and Technology, Innovation Proposals
တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကြား ပူးတွဲသုတေသန ဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ လျှေှာက်ထားနိုင်ခြင်း
၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့် Global Environmental Institute (GEI) ၏ Executive Director JIN Jiaman တွေ့ဆုံ၍ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလျာထားချက်အရ ဆိုလာစွမ်းအင်အလားအလာ နှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများအား အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
Home The Law on Standardization
The Pyidaungsu Hluttaw Law No.28/ 2014
The7Day of 1376 M.E.
The Pyidaungsu Hluttaw here by enacts this law.
Title and Definition
1.This Law shall be called the Law on Standardization.
2.The following expression contained in this Law shall have the meanings given here under:¾
(a)Government means the Union Government of the Republic of the Union of Myanmar.
(b)Standard isadocument, established by consensus and approved byarecognized body, that provides for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order inagiven context.
(c)Standardization meansaprocess draw and prescribed standard by comprising relevant experts collectively in order to develop economy by aiming for the interest of the producers, and consumers, and considering the necessities of practical usefulness condition and safety inacase to be carried out.
(d)Myanmar Standard means national standard prescribed by the National Standard Council;
(e)Foreign Standard means national standard of such country prescribed by the organization which has legal authority in any foreign country;
(f)Regional Standard means standard prescribed by the regional standard organization;
(g)Regional Standard Body means Standard body related the organization such as ASEAN organization or European Union region organization;
(h)International Standard means standard prescribed by the international standard organizations;
(i)Mandatory Standard meansaStandard enforced by the National Standard Council concerning the protection of human health, security for personal property and safety;
(j) Voluntary Standard meansastandard where standardization is not covered with mandatory standard;
(k) Accreditation Certificate means certificate issued under this Law recognizing that it is competent to carry out technical examination, laboratory examination and other necessary services for enabling to issue recommendation on quality;
(l) Certificate of certificication means recommendation certificate issued under this law that it is in conformity with standard in product, production process and service;
(m)Standardization Mark includes accreditation mark and quality mark which are product quality mark, production process quality mark and service quality mark;
(n) Legal metrology means entire procedural arrangement relating to administration, legislation and technology determined by the relevant governmental department, governmental organization to ensure appropriate quality and credibility of measurements related to official controls, trade, health, safety and conservation of environment;
(o)Council means the National Standard Council formed under this Law;
(p)Committee means the Standard Working Committee formed under this Law;
(q)Department meansadepartment which is assigined to peform in the matter of standardization by the Ministry of Science and Technology;
3.The objectives of this Law are as follows:
(a)to enable to determine Myanmar Standards;
(b) to enable to support export promotion by enhancing quality of production organizations and their products, production processes and services;
(c) to enable to protect the consumers and users by guaranteeing imports and products are not lower than prescribed standard, and safe from health hazards;
(d) to enable to support protection of environment related to products, production processes and services from impact, and conservation of natural resources;
(e)to enable to protect manufacturing, distributing and importing the disqualified goods which do not meet the prescribed standard and those which are not safe and endangered to the environment;
(f)to support on establishing the ASEAN Free Trade Area and to enable to reduce technical barriers to trade.
(g) to facilitate technological transfer and innovation by using the standards for the development of national economic and social activities in accordance with the national development programme.
Formation of National Standard Council and Functions and Duties Thereof
4. The Government:
(a) shall form the National Standard Council comprising not more than (30) of relevant persons.
(1)aUnion Minister assigned by the Government Chairman
(2) representatives from the Ministries Members
(3) representatives from the Nongovernmental Organizations Members
(4) prominent persons and other appropriate persons Members
(5) director general of the Myanma Scientific and Technological Research Department
(b)may determine vice-chairman and joint secretary if necessary, in forming the council under Sub-section (a).
(c)may amend and reform the council formed under Sub-section (a) as may be necessary.
5.The functions and duties of the Council are as follows:
(a)laying down policy and guiding for enabling to implement the objectives of this Law;
(b)prescribing Myanmar standard by accepting appropriate standard among international, regional and foreign standards or by altering them in conformity with the situation of Myanmar;
(c)prescribing Myanmar standard for raw material, equipment, product, process, methods of experiment, production and servicing;
(d)prescribing Myanmar standard for import goods and export goods;
(e)prescribing mandatory standards to be complied with Myanmar standards;
(f)performing the application of Myanmar standards by the relevant production and service;
(g)directing the Committee from time to time to examine whether or not the department, organization obtained the right to use standard mark complies with the stipulations contained in the relevant standard;
(h)prescribing terms and conditions relating to the issued of accreditation and certificate of certification;
(i)deciding on submission of the Committee relating to accreditation and certificate of certification;
(j)confirming standard marks of each category of certificate of certification to be issue by the department, organization which obtains the accreditation;
(k)directing the Committee to carry out relating to legal metrology as may be necessary;
(l)giving warning to the relevant department, organization or person that obtains the accreditation, suspending for limited period or cancelling the accreditation when it is scrutinized and found out that any condition contained in the accreditation is violated.
(m)submitting the matter of national standardization and funding to cabinet from time to time.
Formation of the Standard Working Committee and Functions and Duties Thereof
(a)shall form the Standard Working Committee comprising the Director General of the Department or an appropriate expert as chairman, persons from the relevant government department and governmental organizations, representative from the relevant nongovernmental organizations, experts relating to science and engineering and lawyers as members.
(b)shall determine and assign duty to the secretary in forming under Sub-section (a) and may determine vice-chairman and joint-secretary, if it is necessary;
(c)may amend and form the Committee formed under Sub-section (a) as may be necessary.
7.The functions and duties of the Committee are as follows:
(a)drawing and submitting the Myanmar Standards to the Council;
(b)prescribing necessary appropriate technology, production process and equipments for enabling to produce products that are in conformity with standard;
(c)deciding whether or not in conformity with Myanmar Mandatory Standard to be complied by examining the products from time to time.
(d)coordinating and arranging for enabling to examine the import goods and export goods whether or not they are in conformity with Myanmar Standard.
(e)submitting to the Council after re-scrutinizing the matter relating to those whether or not issue accreditation and whether or not extend the term of accreditation;
(f)submitting to the Council the derivations relating to techniques of legal metrology and carrying out in accordance with the directives of the Council;
(g)inspecting and causing to inspect from time to time, the site of the person who has obtained certificate of certification for enabling to know whether or not the product, raw material used, technique, production process and equipment are in conformity with the relevant standards;
(h)holding trainings, seminars and workshops relating to standardization.
(i)advising and submitting to the Council for enabling to amend the Myanmar Standard if necessary according to the market and other situations;
(j)submitting to the Council by differentiating in advise and preparing the mandatory standard and voluntary standard in Myanmar Standards;
(k)forming technical sub-committees for enabling to carry out the duties and functions of the Committee and prescribing duties and functions of such sub-committees;
(l)performing functions and duties assigned by the Council from time to time.
8.The Committee shall:
(a)submit the important policy matters to the Council and carry out by complying with its decision;
(b)submit its work performance report to the Council in accordance with the stipulations.
Application for and Issue of Accreditation Certificate
9. Any internal or foreign department, organization desirous of issuing certificate of certification and any person desirous of participating in businesses relating with any department, organization which has the right to issue quality recommendation shall apply to the Department in accordance with stipulations to obtain accreditation certificate.
10. The Department shall, on receiving the application under Section9to obtain the accreditation certificate scrutinize in accordance with stipulations whether or not department, organization and persons applied are enable to carry out the technical examinations, chemical examinations and other necessary service industries , submit to the Council through the Committee with remark.
11. Whether for issuing or for refusing the accreditation certificate after scrutinizing the recorrendation made by the department and shall inform back to the department through committee.
12. The departments, organizations or persons which obtained accreditation certificate may allow to use the accreditation mark.
13. The department shall perform in accordance with the decision of the Council.
14. (a) The departments, organizations and persons which obtained accreditation certificate shall apply to the directorate in accordance with stipulations if it is
desirous to extend the term of accreditation certificate.
(b) The department shall submit to the Council through the Committee with remark after scrutinizing the application in accordance with stipulations under Sub-section (a).
15. (a) The Council may extend the term of accreditation certificate or refuse to extend the term of accreditation certificate after scrutinizing the submission under Sub-section (b) of Section 14.
(b) The Council may prescribe the term of accreditation certificate, accreditation certificate fees, extension fees of the term of accreditation certificate.
16. The department, organization which has obtained the accreditation certificate shall:
(a) register to the Department after obtaining the approval of the Council on the standardization mark for each category of certificate of certification for which it may issue.
(b) submit the list of businesses to which it has issued quality recommendation to the department in accordance with stipulations.
Application for and Issue of Certification
17. A person desirous of obtaining certificate of certification shall apply to the department and organization which has obtained the accreditation.
18. The department and organization which has obtained the accreditation is entitled to issue the following categories of certificate of certification, after examining in accordance with stipulations:
(a) product certificate of certification;
(b) production process certificate of certification;
(c) service certificate of certification;
Taking Action by Committee
19. The Committee may, if it is found out that holder of certificate of certification violates any term or condition contained in the relevant recommendation, pass any of the following administrative orders:
(b) suspending the certificate of certification for limited period;
(c) cancelling the certificate of certification
20. The Committee may, if it is found out that holder of accreditation certificate violates any term or condition contained in the relevant recommendation, pass any of the following administrative orders:
(b) suspending the accreditation certificate for limited period;
(c) cancelling the accreditation certificate
21. A person who is not satisfied with any order passed by the Committee under Section 19, 20 or any other decision passed by the Committee may appeal to the Council within 60 days from the date of passing of such order or decision.
22. The Council may direct to confirm, cancel, amend or review the order or decision of the Committee.
23. The decision of the Council shall be final and conclusive.
24. Any person who issues quality recommendation without accreditation certificate, on conviction, shall be punished with imprisonment foraterm not exceeding three years or with fine not more than three million Kyats or with both.
25. Any person who commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with imprisonment foraterm not exceeding three years or with fine not more than three million Kyats or with both:
(a) counterfeiting any standardization mark;
(b) using standardization mark that is not allowed to use or not confirmed by the Council;
(c) advertising, selling or possessing in order to sell any product or advertising or carrying out any service that is not in conformity with mandatory standard prescribed by the Council knowingly or likely to know.
26. If any person who obtained certificate of certification uses standardization mark on the product which is not in conformity with the relevant standard or relating to service shall be punished with imprisonment foraterm not exceeding one year or with fine not more than one million Kyats or with both.
27. The Committee shall expend the fund in accordance with the financial rule which acquire funds for its work from;
(a) the sale of standards, relevant documents and other publication;
(b) membership fee;
(c) payments received for services offered;
(d) the Union budget;
28 Report of the auditor regarding the Committee fund which is audited by the auditor as recognize by the government shall be submitted to the cabinet through council in every fiscal year.
29 The person who obtains the certificate of certification whose representative and successors shall oblige the mandatory standards.
30. (a) Ministry shall define the payment in honour and cost of Council and Committee
members by the approval of Government.
(b) Department shall arrange including the payment in honour, cost ,office works of
Council and Committee according to the Sub-section (a).
31. Any offence contain in this Law is cognizable by the Myanmar Police Force.
32. If an exhibit involved in any offence prosecuted under this Law is not easily producible before the court, such exhibit needs not be produced before the court. However,areport with other relevant documentary evidence as to the manner of custody of the same may be submitted. Such submission shall be deemed as if it wereasubmission of the exhibit before the court and the relevant court may dispose of the same in accordance with this Law.
33 In implementing the provisions contained in this Law:
(a) the Ministry of Science and Technology may issue rules and regulations with the approval of the Government and may issue procedures, as may be necessary.
(b) the Ministry of Science and Technology and the Council may issue notifications, orders, directives and procedures, as may be necessary.
(c) the Committee and the Department may issue orders and directives, as may be necessary.
I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar.
sd / Thein Sein
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၈။ )
၁၃၇၆ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-
(က) အစိုးရအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ခ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတစ်ခု၌ အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီစေရန်ရည်ရွယ်၍ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း က အများသဘောတူညီချက်ကို အခြေခံ၍ ပြုစုရေးဆွဲအတည်ပြုထားသည့် ယေဘုယျနှင့်အကြိမ်ကြိမ် အသုံးချနိုင် သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်မှုသွင်ပြင် လက္ခဏာ များ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အကျိုးဆက်များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြသည့် သတ်မှတ်ချက် များကို ဆိုသည်။
(ဂ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စတစ်ခုတွင် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စားသုံးသူများ၊ သုံးစွဲသူများ၏ အကျိုးအတွက် လက်တွေ့ အသုံးဝင်မှု အခြေအနေနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မြင့်မားစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ များ စုပေါင်းပါဝင်၍ စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲသတ်မှတ်သည့် ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ ကို ဆိုသည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်း ကောင်စီ က သတ်မှတ် သော အမျိုးသား စံချိန်စံညွှန်းကို ဆိုသည်။
(င) ပြည်ပနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်သော ယင်းနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်း ကိုဆိုသည်။
(စ) ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့က သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(ဆ) ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥရောပဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့ တစ်ခုခုက သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်း ကိုဆိုသည်။
(ဈ) မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ လူ့ကျန်းမာရေး၊ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်း လုံခြုံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်း ကောင်စီက ဤဥပဒေအရ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည်ဟု သတ်မှတ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းကိုဆိုသည်။
(ည) ဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာနိုင်သည့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော စံချိန်စံညွှန်းကို ဆိုသည်။
(ဋ) အသိအမှတ်ပြုလွှာဆိုသည်မှာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနှင့်လိုအပ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသော ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် အထောက်အထားလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ဌ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း ဤ ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသည့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ဍ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဆိုသည်မှာ အသိအမှတ်ပြုကြောင်း အမှတ်တံဆိပ် နှင့် အရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး အမှတ် တံဆိပ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေးအမှတ်တံဆိပ်တို့ ပါဝင်သည်။
(ဎ) ဥပဒေအရတိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဆိုသည်မှာ တရား၀င်ထိန်းချုပ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့်အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုများကို ပြည့်စုံတိကျစေရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အစီအစဉ် တစ်ရပ်လုံးကို ဆိုသည်။
(ဏ) ကောင်စီဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည့် အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို ဆိုသည်။
(တ) ကော်မတီဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်း ကော်မတီ ကိုဆိုသည်။
(ထ) ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန က စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးသော ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်၊
(ခ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးကို မြင့်မားစေပြီး ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်၊
(ဂ) သွင်းကုန်များနှင့် ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်စံချိန်စံညွှန်း အောက် မနိမ့်ကျ‌ကြောင်းနှင့် လုံခြုံမှုရှိပြီး ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ကြောင်း အာမခံခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများနှင့် သုံးစွဲသူများကို အကာအကွယ်ပေး နိုင်ရန်၊
(ဃ) ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လည်းကောင်း ဆက်စပ်နေသော ပတ်၀န်းကျင်ကို အန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရေး နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊
(င) သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေး ပြည့်မီခြင်းမရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဘေးဥပဒ်မကင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်နိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် နိုင်ငံ အတွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသများ ထူထောင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီး များကို လျော့ချနိုင်ရန်၊
(ဆ) မြန်မာ့အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများကို အသုံးချ၍ တိုင်းပြည်၏ နည်းပညာလွှဲပြောင်းပေးမှု နှင့် နည်းပညာတီထွင်မှုတို့ကို လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရန်။
အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(က) အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦးထက်မပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည်-
(၁) အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တစ်ဦး၊ ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ
(၃) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ
(၄) ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်ဂုဏ်သတင်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အခြားသင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(၅) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အတွင်းရေးမှူး
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ကောင်စီဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းထားသောကောင်စီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။
၅။ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မူဝါဒ ချမှတ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း၊
(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်းများအနက် သင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းများကို လက်ခံ၍ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်အညီပြောင်းလဲ၍ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို သတ်မှတ် ခြင်း၊
(ဃ) သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများတွင် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(စ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများက လက်ခံကျင့်သုံးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်သုံးစွဲခွင့် ရယူထားသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ မရှိစမ်းသပ် စစ်ဆေးရန် ကော်မတီသို့ အခါ အားလျော်စွာ ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဇ) အသိအမှတ်ပြုလွှာနှင့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဈ) အသိအမှတ်ပြုလွှာနှင့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း၊
(ည) အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးမည့်အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များ ကို အတည်ပြုခြင်း၊
(ဋ) ဥပဒေအရတိကျစွာ တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန် ကော်မတီသို့ လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဌ) အသိအမှတ်ပြုလွှာပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိလျှင် အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အား သတိပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(ဍ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင်‌့ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာကိစ္စများကို အစိုးရအဖွဲ့ သို့ အခါအားလျော်စွာ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
(က) ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သို့မဟုတ်) အခြားသင့်လျော်သည့်ပညာရှင် တစ်ဦးဦးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် ဥပဒေပညာရှင် များက အဖွဲ့၀င်များအဖြစ်လည်းကောင်း ပါ၀င်သည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်း ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အတွင်းရေးမှူးကို သတ်မှတ်တာ၀န် ပေးအပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။
၇။ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်းများကို ရေးဆွဲ၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(ခ) စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) ထုတ်ကုန်များကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေး၍ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
(ဃ) သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းစီစဉ်ပေးခြင်း၊
(င) အသိအမှတ်ပြုလွှာထုတ်ပေးရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ကိစ္စရပ်များကို ထပ်ဆင့် စိစစ်၍ ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(စ) ဥပဒေအရ တိကျစွာတိုင်းတာခြင်း နည်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ကို ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်းနှင့် ကောင်စီ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ထုတ်ကုန်၊ အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ သိရှိနိုင်ရန် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခါအားလျော်စွာ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးစေခြင်း၊
(ဇ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊
(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို ဈေးကွက်နှင့် အခြားအခြေအနေများအရ လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကောင်စီသို့ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
(ည) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို ရေးဆွဲ၍ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်း နှင့် ဆန္ဒအလျောက် လိုက်နာနိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို အကြံပြုချက်ဖြင့် ကောင်စီသို့ ခွဲခြားတင်ပြခြင်း၊
(ဋ) ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းဆပ်ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို သတ်မှတ် ခြင်း၊
(ဌ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(က) မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးကြီးသည့်ကိစ္စများကို ကောင်စီသို့ တင်ပြ၍ အဆုံးအဖြတ် ခံယူဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
အသိအမှတ်ပြုလွှာ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း
၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခွင့်ရရှိလိုသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည်လည်းကောင်း၊ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ဆက်နွယ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သည်လည်းကောင်း အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိရန် ပုဒ်မ ၉ အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ လျှောက်ထားသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များက နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများနှင့် အခြားလိုအပ်သော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၁၁။ ကောင်စီသည် ဦးစီးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်ကို စိစစ်သုံးသပ်၍ အသိအမှတ်ပြုလွှာ ထုတ်ပေးရန် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး ကော်မတီမှ တစ်ဆင့်ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်း ကြားရမည်။
၁၂။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသိအမှတ်ပြု ကြောင်း အမှတ်တံဆိပ်ကို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄။ (က) အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီး ဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၁၅။ (က) ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ တင်ပြချက်ကိုစိစစ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အသိမှတ်ပြုလွှာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ) ကောင်စီသည် အသိအမှတ်ပြုလွှာသက်တမ်း၊ အသိအမှတ်ပြုလွှာကြေး နှင်‌့ အသိအမှတ်ပြုလွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင်‌့ခများကို သတ်မှတ်ရမည်။
၁၆။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည်-
(က) ထုတ်ပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးထောက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ကို ကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ဦးစီးဌာန တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။
အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ရရှိရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း
၁၇။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ရရှိလိုသူသည် ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၈။ အသိအမှတ်ပြုလွှာရရှိသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စမ်းသပ် စစ်ဆေး၍ စည်းကမ်းချက်များ ပါရှိသည့် အောက်ပါအရည်အသွေး ထောက်ခံချက်အမျိုးအစား များကို ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည်-
(ခ) ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်၊
၁၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို၊ ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ကော်မတီသည် အောက်ပါ အရေးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(ခ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဂ) အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၂၀။ အသိအမှတ်ပြုလွှာ ရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလွှာပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို၊ ဖောက်ဖျက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ကော်မတီသည် အောက်ပါ အရေးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
(ခ) အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
(ဂ) အသိအမှတ်ပြုလွှာကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၂၁။ ကော်မတီက ပုဒ်မ ၁၉ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၀ အရ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အရေးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကော်မတီကချမှတ်သော အခြားဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ မကျေနပ်သူသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ကောင်စီ သို့ အယူခံနိုင်သည်။
၂၂။ ကောင်စီသည် ကော်မတီ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပယ်ဖျက် ခြင်း နှင်‌့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၂၃။ ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
၂၄။ မည်သူမဆို အသိအမှတ်ပြုလွှာမရရှိဘဲ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ကို ထုတ်ပေးကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် သိန်းသုံးဆယ် ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၅။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် သိန်းသုံးဆယ် ထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-
(က) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကို အတုပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ) ကောင်စီက သုံးစွဲခွင့်ပြုထားခြင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသော စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊
(ဂ) ကောင်စီက သတ်မှတ်သည့် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်း မရှိကြောင်း သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ သိရန် အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချရန် အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ကြော်ငြာခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂၆။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီ ခြင်းမရှိသော ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ၀န်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၂၇။ ကော်မတီသည် မိမိ၏ရန်ပုံငွေကို အောက်ပါ ရငွေများဖြင့် ထူထောင်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်-
(က) စံချိန်စံညွှန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြား စာအုပ်စာတမ်းများ ကို ရောင်းချရငွေများ၊
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ရရှိငွေများ၊
(ဃ) နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ငွေများ။
၂၈။ ကော်မတီ၏ ရန်ပုံငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု စာရင်းစစ်များက စစ်ဆေး၍ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ကောင်စီ မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တင်သွင်းရမည်။
၂၉။ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ရရှိသူ၊ ယင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်ခံသူတို့သည် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာရမည်။
၃၀။ (က) ဝန်ကြီးဌာနသည် ကောင်စီဝင်များနှင်‌့ ကော်မတီဝင်များ၏ ချီးမြှင်‌့ငွေနှင်‌့ စရိတ်များ
ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်သော ချီးမြှင်‌့ငွေနှင် စရိတ်များကို လည်းကောင်း၊ ကောင်စီနှင်‌့ကော်မတီတို့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း တာဝန်ယူစီစဥ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၁။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၃၂။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုသော ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် လွယ်ကူခြင်းမရှိပါက ယင်းသက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ခြင်းမပြုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းကို အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အခြား စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တင်ပြခြင်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ သက်သေခံပစ္စည်း တင်ပြဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၃။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဥ်းနှင်‌့ စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန် နိုင်သည်။
(ခ) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင်‌့ ကောင်စီတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ဂ) ကော်မတီနှင်‌့ ဦးစီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့် နှင်‌့ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံ့စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်လျက်ရှိပါ သည်။ ြမန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနသည်၁၉၄၇ခုနှစ်မှစ၍ “နိုင်ငံတော်စက်မှုလက်မှု သုတေသနဌာန”အမည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ နိုင်ငံတော်စက်မှုလက်မှုသုတေသနဌာနအား သတ္တုဗေဒသုတေသနဌာန၊ ဆဲလ်လူးလို့ သုတေသနဌာနနှင့် ဓါတုဗေဒ ဓါတ်ခွဲဌာနတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။၁၉၅၄ နိုင်ငံတော်စက်မှုလက်မှုသုတေသနဌာနအား တိုးချဲ့ရန်နှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Union of Burma Applied Research Institute (UBARI) ဥပဒေအား ရေးဆွဲခဲ့ပြီး (၅-၃-၅၅)ရက်နေ့တွင် ဥပဒေ ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်more...
© 2018 All rights reserved. Designed By World Wide Myanmar